ကုရ်အာန်ကျမ်းမှ မုက္ခပတ်တော် တစ်ခုအား ဟားဗတ် တက္ကသိုလ် ဥပဒေဌာန အ၀င်တွင် ချိတ်ဆွဲထား | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Interfaith bridge building
A great song of Humanity by Guy Sebastian – “Get Along” »
ဥပဒေဌာန ၏ ပင်မ ၀င်ပေါက်ကြီးတွင် တရားမျှတခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးသော စကားလုံးများဖြစ်သည် ဟု စူရာဟ်အလ်နိစာ(အမျိုးသမီးများ ကဏ္ဍ) ၏ အာယာသ်တော် နံပါတ် (၁၃၅) ကို ၀င်ပေါက်နံရံတွင် ရေးသားထားသည်။
ထိုအာယာသ်တော် ၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ
“အို- မုအ်မင်န် သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့၊ အသင်တို့သည် (မည်သည့်ကိစ္စမျိုး၌မဆို) တရားမျှတမှုကို ထာဝစဉ် တည်တံ့စေသူများ (တနည်း) တရားမျှတမှုအပေါ်၌ မြဲမြံစွာ တည်တံ့သူများ ဖြစ်ကြလေကုန်။ (သက်သေခံရာ၌လည်း)မိမိတို့ ကိုယ်ကျိုးနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်စေ ၊ မိဘနှစ်ပါးနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်စေ၊ ဆွေမျိုးနီးစပ်တို့နှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်စေ ၊ (အသင်တို့သည်) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုသာ ထောက်ထား၍ (တိကျမှန်ကန်စွာ) သက်သေခံသူများပင် ဖြစ်ကြလေကုန်။
အကယ်၍ (အသင်တို့က) ဆန့်ကျင်၍ သက်သေထွက်ဆို ရမည့်သူသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူပင်ဖြစ်စေ ၊ ဆင်းရဲသူပင်ဖြစ်စေ (မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် (အသင်တို့ထက်) ၄င်းတို့နှစ်ဦးလုံးနှင့် အနီးစပ်ဆုံးသော အရှင် ဖြစ်တော်မူပေ၏ ။ သို့ဖြစ်ပေရာ အသင်တို့သည် တရားမျှတမှုမှ တိမ်းစောင်းမသွားကြရန် စိတ်၏ အလိုဆန္ဒကို မလိုက်နာ မလိုက်စားကြကုန်လင့်။
သို့ရာတွင် အကယ်၍ အသင်တို့သည် (သက်သေခံရာတွင် လိမ်လည်) ကွေ့ကောက် ပြောဆိုကြပါလျှင် ၊ သို့တည်းမဟုတ် (သက်သေခံခြင်းမှ လုံးဝ) လွှဲဖယ် တိမ်းရှောင်ကြပါလျှင် ဧကန်မလွဲ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အသင်တို့ပြုမူသမျှတို့ကို အကြွင်းမဲ့သိမြင်တော်မူသော အရှင်မြတ်ပင် ဖြစ်တော် မူပေသတည်း။” ဟု ဖြစ်သည်။
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်သင်ကြားနေသော ဆော်ဒီကျောင်းသားတစ်ဦး သည် အာယာသ်တော် အား ဓါတ်ပုံရိုက်ကာ သူ၏ Twitter page တွင် ဖော်ပြခဲ့ခြင်းကို ဆော်ဒီ နေ့စဉ်သတင်းစာ Ajel မှ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဥပဒေဌာနက တင်လိုက်တဲ့ ဒီ အာယာသ်တော် ဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက် တရားမျှတခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကောင်းဆုံးသော ဖော်ပြချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းသိပါတယ်” ဟု ထိုကျောင်းသား Abdullah Jumma က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကို (၁၆၃၆) ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ မန်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ၊ Cambridge မြို့တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အမေရိကရှိ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသော အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ ။
Tags: Abdullah Jumma, Cambridge, Harvard University, Online Communities, Qur'an, Social Networking, Twitter, United States
This entry was posted on January 18, 2013 at 7:49 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.